Akwụkwọ ahụ kpaliri ndị ogbu mmadụ atọ ma "mechaa" ndụ Lennon | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ nke kpaliri ndị ogbu mmadụ atọ ma 'gbuo' ndụ Lennon
Alex Martinez | | Akwụkwọ, oké ụjọ
Ndị ọchịchị wepụrụ ozu John Lennon.
N'akụkọ ihe mere eme e werewo ọtụtụ akwụkwọ dị ka ndị a bụrụ ọnụ. Ọnwụ na ọnọdụ ndị ọzọ, ndị na-egbu ihe ma ọ bụ ndị na-apụ n'anya ejirila obi abụọ jikọta ya na ọrụ ma ọ bụ ndị edemede dị iche iche.
Ikekwe otu n'ime ikpe ndị a ma ama bụ nke nwere akwukwo "Onye nwuchi na Rye" nke JD Salinger bipụtara na 1951. Mgbe ebipụtara ọrụ ahụ na US, ọ kpatara ọgba aghara n'etiti ọha mmadụ America n'ihi ịnagide okwu metụtara mmekọahụ, ịismụbiga mmanya ókè ma ọ bụ ịgba akwụna n'ụzọ mkpasu iwe yana okwu ndị na-adịkarịghị n'oge ahụ.
Agbanyeghị, esemokwu a tụgharịrị mgbe e bipụtara ya naanị ihe kpatara bụ ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ahịa na na ewu ewu nke ọrụ ahụ. Ọbụna, n'ime afọ ndị sochirinụ, ọ ghọrọ akwụkwọ ọgụgụ nke abụọ a kacha mụọ n'ụlọ akwụkwọ. N'otu oge ahụ, n'ime 90s ruo 2005, "Onye nlekọta n'etiti etiti" nọrọ na nke iri n'ọkwa Akwụkwọ A na-agụkarị na North America.
N’agbanyeghi otutu ndi mmadu a na-agaghi ekweta, akwukwo a nwekwara ihe omimi na esemokwu n’ihi na ndị ogbu mmadụ dị iche iche etinyela ma ọ bụ tinyela na akwụkwọ akụkọ a dịka ihe kpatara ma ọ bụ ihe na-akpata mpụ ha.
Nke mbụ n'ime ikpe ndị a bụ nke Mark Davis Chapman onye, ​​na 1980, gbagburu John Lennon n'èzí ụlọ ahụ Dakota na Manhattan. Mgbe o gbuchara onye otu a ma ama na Beatles, onye gburu ọchụ jiri nwayọ nọdụ ala wee gụọ otu akwụkwọ ọgụgụ a ruo mgbe ndị uwe ojii jidere ya na-etinyeghị nguzogide ọ bụla.
Ozugbo e jidere akwụkwọ ahụ, ndị nchọpụta ahụ ghọtara na, n'ime mkpuchi ya, Mark Davis Chapman dere na pensụl: "Nke a bụ nkwupụta m." Ewezuga nke a, mgbe ewepụtara nkwupụta awa ole na ole ọ gbasasịrị, ogbu ọchụ ahụ kwenyesiri ike na o kwenyesiri ike na ọtụtụ n'ime ya bụ Holden Caulfield (isi okwu nke akwụkwọ ahụ) nakwa na ndị ọzọ fọdụrụ ga-abụ Ekwensu.
Okwu nke abụọ metụtara akwụkwọ ahụ mere otu afọ mgbe ogbugbu Lennon gasịrị. N'oge a, ebumnuche nke onye ogbugbu ahụ emezughị ka onye nkwado ya, Ronal Reagan nabatara ya. John Hinckley Jr, onye aha ya bụ onye a na-ekwu okwu, gbalịrị na 1981 iji kwụsị ndụ onye isi ala America site na ịgbanye ya egbe.
Mgbọ égbè ahụ John Kinckley gbarụrụ gbagburu ozu onye isi ala ahụ site na mkpo ya ma debe sentimita ole na ole site n'obi ya. N'ikpeazụ, dịka anyị kwurula, Reagan jisiri ike lanarị ọgụ ahụ. Ka o sina dị, onye na-awakpo ya kwuru ugboro ugboro n'oge ndụ ya na ọ na-eche banyere akwụkwọ ahụ anyị na-ekwu maka ya.
N'ikpeazụ, ikpe na-esonụ mere na 1989. Robert John Bardó gburu onye na-eme ihe nkiri Rebecca Lucile Schaeffer n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ya mgbe m megbusịrị ya ruo afọ atọ. Mgbe e jidere onye gburu ọchụ O jikwa otu "Onye nwuchi na Rye".
O buru na akwukwo a bu ihe omumu ya na ihe ndi ozo bu ihe nke anyi na - ekwenyeghi. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe doro anya bụ na ịdị mfe ọnụnọ ya n'okwu atọ a na-eme ka anyị chee echiche n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ enwere mmekọrịta na eziokwu.
Na-enweghị ịbanye na ajụjụ omimi ma ọ bụ nke na-enweghị isi, anyị nwere ike ikwenye na mgbe ụfọdụ, dabere na ọrụ na nke aka, enwere ike ịgba ume ma ọ bụ gbaa ume nke ahụ nwere ike ịkpata, dị ka anyị hụworo, mgbu nke ụfọdụ ndị na-agụ ya.
Akwụkwọ a dị n'echiche m dị ala, otu n'ime ihe ịtụnanya dị adị na ọ bụghị nke ukwuu n'ihi atụmatụ ya, agbanyeghị na ọ gụnyere akụkụ dị mkpa nke oge uto na akparamaagwa ya, mana n'ihi ọnọdụ gbara akwụkwọ ahụ n'onwe ya gburugburu. N’enweghi obi abụọ ọ bụla, ya mere, ezigbo nhọrọ edemede maka abalị ndị ụjọ ga-eme n’ọdịnihu, n’ihi ụbọchị anyị hụrụ onwe anyị na karịa na ụwa Anglo-Saxon, dịkwasịrị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » oké ụjọ » Akwụkwọ nke kpaliri ndị ogbu mmadụ atọ ma 'gbuo' ndụ Lennon
Agụwo m ya na ọ bụghị maka nke ahụ mana ị maraworị otú ndị mmadụ nọ na United States.
Edemede mara mma, mana isi okwu a bụ na akpọrọ akwụkwọ ahụ "The Catcher in the Rye" ọ bụghị dịka e dere ya ebe a "n'ime afọ ndị sochirinụ, ọ ghọrọ akwụkwọ ọgụgụ nke abụọ a kacha mụọ n'ụlọ akwụkwọ. N'otu oge ahụ, n'ime afọ ndị 90 ruo na 2005, "The Guardian among the Center" nọgidere bụrụ nke 10 na ogo nke ọtụtụ akwụkwọ a na-agụ na North America. "
Ogechi Ugochukwu dijo
Anaghị m ahụ ezigbo mmekọrịta dị n’etiti akwụkwọ a na igbu ọchụ, onye mbido anaghị enwe echiche igbu mmadụ ọ bụla.
Zaghachi Miguel Angel,
Akụkọ mgbe ochie II. Na rum rọm karama
Enid Blyton. Reissu na esemokwu?